Afganistana : Fonja, Fahantrana ary Pôlitika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2009 9:04 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Português, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Raha nanambara ny mpitantana miaraka amin'i Obama fa hanampy miaramila 17 000 any Afganostana hanampy ireo efa any an-toerana dia miresaka mikasika ny fanamby miandry an'i Afganistana tahaka ny hoe fanagadrana vehivavy, ny fahantrana sy ny pôlitika ny mpitoraka bilaogy.
Baktash Siawash, mpanao gazety ao amin'ny toby ao Kabul sady mpitoraka bilaogy no nanoratra mikasika ny zava-tsarotra iainan'ireo vehivavy voafonja :
Ny fonjan'ny vehivavy: vao haingana tany avaratry ny faritanin'i Kunduz no nisy vehivavy folo migadra miaraka amin'ny ankizy 6 hatramin'ny 10 taona miaraka aminy ao. Efitrano kely 2 misy trano fivoahana no misy azy ireo. Ny fonjan'ny Pul-e-Charkhi any Kabul renivohitra no fonja malaza indrindra : ratsy koa ny fitondrana ny vehivavy ao amin'io fonja io. Tsy nahazo nitsidika ny fonja natokana ho an'ny vehivavy moa ny mpanao gazety.
Mpitoraka bilaogy iray monina any Etazonia no nanoratra ao amin'ny Afghancorner fa tsy milamina ny any Afganistana ary mihenjana ny tady aminy sy Etazonia. Mbola nampiany hoe :
Nilaza zavatra maro mikasika an'i Afganistana ny filoha Hamid Karzai (Talibana, Pakistana, ny fifidianana filoham-pirenena vonjy maika sy ny fifandraisan'ny governemantany amin'ny filoha vaovaon'i Etazonia) niaraka tamin'i Al Jareeza's David Frost. Voamarika fa naneho ny heviny ny firaisam-ben'ny firenena eran-tany indrindra ny kolikoly any Afganistana, ary nanakiana ny governemanta i Obama noho ny tsy fahampian'ny fandrindrana sy ny fitantanana. Tamin'ny fandraisam-peo farany natao an'i Karzai no nilazany fa matroka ny fifandraisana amin'i Obama.
I Christian Bleuer, mpianatra PhD avy any Aostralia no nanoratra ao amin'ny in Ghosts of Alexander fa i Jennifer McCarthy, mpianatra mpikaroka PhD no nanapak-kevitra fa hiaina ny toe-bolan'i Afganistana ankehitriny mba hampitomboana ny fanentanana sy ny fanampiana ara-bola hafa. Izy ihany koa no hanome ny fizotr'izany zavatra rehetra teneniny amin'ny bilaogy izany.
Tsy ny zavatra rehetra anefa no ratsy sy matroka any an-toerana araka ny nosoratana ao amin'ny bilaogy fa voalaza ao koa i Mirwais Mohsen, Afganistana voalohany amin'ny mpiangaly patinage artistique izay sampana vaovao ara-panatanjahan-tena nosokafana any Kabul.